Latest News | Miss Universe Myanmar
Miss Grand Myanmar
Current Title Holder
Hnin Thway - MUM 2018
Zun Than Zin - MUM 2017
Htet Htet - MUM 2016
May Thaw - MUM 2015
Sharr Htut - MUM 2014
Moe Set - MUM 2013
Title Awards - 2017
Title Awards - 2015
Title Awards - 2014
Title Awards - 2013
Hello Miss Universe TV Program
မျှော်လင့်စောင့်စားနေကြတဲ့ Hello Miss Universe TV Program ကို Sky Net - MNTV Channel တွင် ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ ညနေ ၅:၃၀ မှ ၆:၀၀ နှင့် Channel9တွင် ကြာသပတေး၊သောကြာ နှင့် စနေ နေ့ မနက် ၁၀:၃၀ မှ ၁၁:၀၀(Rely) တွင်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
MUM Fan Club အဖွဲ့ဝင်များအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Miss Universe Myanmar ပရိသတ်များနှင့် ၀ါသနာရှင်များအား မှတ်တမ်းတင်စုစည်းလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Miss Universe Myanmar Fan Club အား ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Miss Universe Myanmar Fan Club အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အသင်းဝင်လစဉ်ကြေး တစ်လလျှင် ၁၀၀၀ိ/- ကျပ်နှုန်းဖြင
2016 Voice of Angels - Concert Series
Living Sound Entertainment မှ ကျင်းပသော 2016 Voice of Angels - Concert Series ပွဲကြီး
Voice of Angesl 2016 - Concert Series ပွဲကြီးကို April 8th, 2016 တွင် Chatrium Hotel Pool Side တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်လို့ လက်မှတ်များ ဝယ်ယူ နိုင်ပါပြီ။
Miss Universe's Smile Train Program
Miss Universe Organization ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကွဲ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်တွေနဲ့ လူနာ တွေကို အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသ ပေးနေတဲ့ Smile Train အစီအစဉ်လေးမှာ Miss Univere Myanmar Organization မှ ပင်လုံဆေးရုံ, New Look New Life အဖွဲ့တို့နဲ့ အတူ Official Partner အဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားမြှာ
MUM 2017 - Application Form
Miss Universe Myanmar Organization သို့ပေးပို့သည့် ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာများမှ လူတွေ့စစ်ဆေးပြီး ဆန်ခါတင်(၆)ဦးမှ (၈)ဦးခန့် ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Miss Universe Myanmar 2017 ပြိုင်ပွဲကြီးကို ၁.၁၀.၁၆ (သို့) ၈.၁၀.၁၆ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါ၍ ဝင်ရောက်ယ
MUM 2017 Press Released
ခင်မင်လေးစားအပ်ပါသော မီဒီယာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာ Miss Universe Myanmar Organization သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ်များအား Miss Universe ပြိုင်ပွဲသို့ စေလွှတ်ယှဉ်ပြိုင်စေခဲ့ပါသည်
Miss Universe Myanmar 2017
Miss Universe Myanmar 2017 ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ကိုယ်စားပြု အလှမယ်များဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်
ရေးအတွက်ပြိုင်ပွဲများကို 1) တောင်ငူမြို့တွင် ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့ပြီး
5) မုံရွာ နှင့်
8th Asia Pacific Conference
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် " 8th ASIA PACIFIC CONFERENCE ON REPRODUCTIVE AND SEXUAL HEALTH RIGHTS
သတိပေးခြင်း နှင့် ခံဝန်ကတိပေးခြင်း
Miss Universe Myanmar Organization မှ Miss Universe Myanmar 2016 ထက်ထက်ထွန်းအား နောက်ဆုံး အကြိမ် သတိပေးခဲ့ပြီး၊ Miss Universe Myanmar 2016 ထက်ထက်ထွန်း မှ ပြန်လည်၍ ခံဝန်ကတိပေးခဲ့ပါသည်။
Smile Train Charity Program
Miss Universe Myanmar Organization မှ Smile Train Charity Program တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Smile Train Charity Program သည် New York အခြေစိုက် Miss Universe အဖွဲ့အစည်းမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်
May - Welcome
Our Lovely - MAY ကို ကြိုဆိုကြပါစို့...
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ 2015 Dec 23, Wednesday ညနေ ၆း၃၀ နာရီမှာ ပြန်လည်ဆိုက်ရောက်ပါမည်။
2015 Miss Universe Competition, Las Vegas
ဒီဇင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ Las Vegasမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖြစ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အလှမယ် မေဘရဏီသော်သည် ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ နေ့လည် ၁၂:၃၀ တွင် ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပါကြော
Miss Universe 2015 - Held on 20 Dec
Miss Universe Myanmar 2015 မေဘရဏီသော် သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ Las Vegas မြို့တွင် ၂၀.၁၂.၁၅ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Miss Universe ပြိုင်ပွဲသိ
2017 City Director ခေါ်ယူခြင်း
2016 အတွင်း Miss Universe Myanmar Organization မှ ကြီးမှူးကျင်းပမည့် Miss Universe Myanmar 2017 ရွေးချယ်ပွဲကြီး အတွက် မြို့ကြီးများမှ ကိုယ်စားပြုအလှမယ်များ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် တာဝန်ယူဆောက်ရွက်လိုသည့် City Director များ ခေါ်ယူနေပါပြီ။
Miss Universe Myanmar 2015 - May Barani Thaw
Miss Universe Myanmar 2016 - Htet Htet Htun
1st Runner Up - Han Lay
2nd Runner Up - Cho Cho Tun
3rd Runner Up - Ei Phyo Thwe
The Best National Costume
The Best National Costume - Han Lay [Contestant No. 20]
Miss Universe Myanmar 2015 & 2016 Final Show အတွက် Ticket များကို ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း
Miss Universe Myanmar 2015 & 2016 Final Show အတွက် Ticket များကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
National Costume & National Gift
အမျိုးသားဝတ်စုံပြိုင်ပွဲနှင့် National Gift ရောင်းချခြင်းအား စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့ ညနေ(၆)နာရီတွင် Gandamar Grand Ballroom ၌ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရောင်းချရငွေများနှင့် ဝင်ကြေးများအား အမျိုးသမီးအားကစားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ကလေးဆေးရုံကြီးသို့ လှူဒါန်းသွား မည်ဖြစ
Auto Mobile Partner
Activities Trip Partner
Official IT Provider
Outdoor Adv Media
Voting & SMS
www.hellomadamcatalog.com | Hot Line : +959788242080, +95 9776617757, +95 9776617767
© 2013 - 2018 Miss Universe Myanmar. All Right Reserved.